Barcelona Oo Guul Xamaasad Leh Kasoo Gaadhay Sevilla Oo Laba Jeer Hoggaanka Qabatay – XAMAR POST
Kooxda Barcelona ayaa guul muhiim ah kasoo gaadhay dhigeeda Sevilla kulan xiiso badan oo ka dhacay gegida Ramon Sanchez Pizjuan oo 4-2 kusoo dhammaatay.
Kulankan oo ahaa mid inta ugu badan ay Sevilla hoggaanka haysay ayaa uu Lionel Messi kasoo dhaliyay saddex gool oo muhiimad xoogan leh halka goolka afraad uu raacsaday Luis Suarez.
Kulanka ayaa sidii la filayay ku bilawday qaab ay Barcelona sidii la filayay weerar tahay waxaana daqiiqadii 12-aad sameeyay isku daygii ugu horreeyay Philippe Coutinho kaas oo meel ka baxsan xerada ganaaxa kubadda ka darbeeyay balse goolhaye Vaclik ayaa bad-baadiyay.
GOOAL: Sevilla ayaa bandhiga goolasha ee kulankan furtay, Kooxda ree Andalus ayaa qaaday weerar rogaal celis ah oo halis badan, Ben Yedder ayaa kubad halis ah u furay Jesus Navas kaas oo wajahay goolka Barcelona isla markaana kubadda uu darbeeyay ku guuleystay inuu dhinac mariyo Ter Stegen.
Intaa kaddib Barca ayaa bilawday dadaalo intii hore ka badan oo ay ku doonayaan inay iskaga soo gudaan goolka rogaal celiska ah ee ay Sevilla ku hormartay.
Jordi Alba ayaa geeska kasoo qaaday kubad sarre waxaana isku dayay inuu madax ku dhaliyo kubadda Aruro Vidal balse waxa uu dhaafin waayay goolhaye Vaclik.
GOOAL: Dedaalada Blaugrana ayaa u dhalay goolka bar-bardhaca, Alba oo shaqo weyn ka hayay geeska midig ayaa markale kubad sarre soo dalacay waxaana markan kubadda oo aan dhulka taaban darbad xoogan la helay Lionel Messi kaas oo halka sarre ka dhaliyay gool cajiib ah.
Kaddib in kulanku uu noqday 1-1 bar-bardhac ay ayay xamaasada ciyaartu hawada gashay, Sevilla ayaa weerarkeedu ahaa rogaal celis dilaa ah halka Barcelona ay isku dayaysay xakamaynta ciyaarta.
GOOAL: Sevilla ayaa markale soo ceshatay hoggaankeedii, Goolkan oo ahaa mid ay khalad ku lahaayeen daafaca Barca ayuu mid kamid ah xiddigaha Sevilla baas dhexda ka furay, Inta badan ciyaartoyda ayaa filayay in kubaddu garoonka ka baxday balse waxa soo qabtay Sarabia kaas oo baas soo hodhigay goolka waxaana dhammaystirkeeda lahaa daafaca midig ee Mercado.
Qaybta hore ee kulanka ayaa kusoo dhammaatay hoggaan 2-1 ah oo ay leedahay kooxda martida loo yahay ee Sevilla, Qaybtan ayaa guud ahaan ahayd mid xiisaheeda leh.
Barcelona ayaa daqiiqadii 54-aad ee kulanka dalbatay rigoore kaddib markii uu Ousmane Dembele oo bedel ku yimid qalad kala kulmay mid kamid ah xiddigaha daafaca Sevilla balse garoosaha ayaa tilmaamay in kulanka lasii wado.
Kulanka ayaa halkiisa kasii socday, Xiddigaha Barca ayaa sii waday weerarka iyadoo Suarez uu markii kulanku marayay 67 daqiiqo kubad ku laagay goolhaye Vaclik balse laagiisa ayaa ahaa mid sahlan.
GOOAL: Barca ayaa kulanka kusoo celisay bar-bardhaca markale, Xiddigaha Barcelona oo ka faa’idaystay kubad uu qalday gioolhayaha Sevilla ayaa weerar kusoo qaaday shabaqa, Kubadda ayaa loo baasay Dembele oo geeska midig jooga kaas oo isna usoo dhiibay Messi waxaana kubadda lugta midig markale figta sarre kaga dhaliyay Messi.
Messi ayaa markale isku dayay inuu goolka saddexaad ee kooxdiisa isla markaana noqon lahaa goolkiisa saddexaad eee kulankan inuu ka dhaliyo geeska midig kubad uu kasoo laagay balse isku daygiisa ayaa markan dul maray goolka.
Ma Messi v Sevilla ayuu kulanku noqday? Kabtanka Barca ayaa markale muujiyay inuu dhibaatada ugu weyn ku yahay kooxda ree Andalus kaddib kubad xeego ah oo uu kasoo bar-tilmaameedsaday goolka meel xerada ganaaxa ka baxsan balse waxa dirqi kaga saaray goolhaye Vaclik.
GOOAL: Messi = Saddexley; Messi ayaa markale ugaadhsaday Sevilla isaga oo dhammaystiray saddexleydiisa kulankan, Weeraryahanka Argentina ayaa kubad uu laagay Alena oo ku dhacday daafaca Sevilla ku hor helay goolka isaga oo si sahlan kubadda uga dul qaaday goolhayaha.
XUSUUSIN: Goolkan ayaa ahaa midkii 25-aad ee uu Messi kasoo dhaliyay horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan waxaana kaddib 25 kulan oo xataa kulankani ku jiro.
GOOAL: Luis Suarez ayaa soo af-jaray rajo kasta oo ay qabtay Sevilla waxaana uu si qurxoon u dhammaystiray baas uu Messi uga dhex furay waxaana uu markiisa kubadda kadul qaaday goolhaye Vaclik.
Ugu dambayn, Kulanka ayaa kusoo dhammaaday guul 2-4 ah oo ay gaadhay kooxda Barcelona, Kulankan ayaa ahaa mid ay Sevilla 2 jeer hoggaanka qabatay balse ay ku adkaatay inay celiyaan Messi
Farmaajo Oo Laamaha Amniga Faray Inay Baaris Ku Sameeyaan Dilkii Xil. Cismaan Cilmi Boqorre
Madaxweynaha BurkonoFaso Afgambigiisii kadib oo Rasaas laga maqlayo…
Maxay ka wadahadleen DF iyo wafdi ka socday Faransiiska ee soo gaaray…
Milateriga Burkina Faso oo la sheegay inay xireen madaxweynaha…
Cutubyo ka tirsan ciidamada difaaca Puntland oo tababar looga furay dugsiga Xorgoble…
Boqor Buurmadow oo sheegay in ay ka baxeen Doorashada…